XOG:- Shirka Jowhar oo loo soo wareejin doono Muqdisho iyo arrintaasi oo weli soo shaac bixin – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shirka Jowhar oo loo soo wareejin doono Muqdisho iyo arrintaasi oo weli soo shaac bixin
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ee gogoshiisa taalay magaalada Jowhar loo soo wareejin doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Saraakiil ku sugan xarunta madaxtooyadda ayaa inoo xaqiijiyay in dadaaladda lagu doonayo in shirka Jowhar loo soo wareejiyo Muqdisho ay tahay si loo dedejiyo dhismaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, islamarkaana uu haatan maraayo meel gaba-gabo ah.
Arrintaan ayaa ah mid ay dowladda federaalka Soomaaliya ku dooneyso inay ku qanciso qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan, kuwaas oo ka biyo diidanaa inay ka qeyb-galaan shirka Jowhar, balse haatan la rajeeynayo inay kasoo qeyb-galaan shirkaas Muqdisho loo soo wareejin doono.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo arrintaan ku howlan ayaa la sheegayaa in shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe wejigiisa labaad ku qabato magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa in magaalada Muqdisho lagu xareeyo ergooyin kala matalaya labada gobol ee Hiiraan iyo Sh/dhexe, kuwaas oo sida la sheegay soo dooran doono madaxweynaha maamulka labadaasi gobol.
Lama oga in odayaasha dhaqanka ee gobolka islamarkaana diidanaa ka qeyb-galka shirka Jowhar ay aqbali doonaan shirkaan loosoo wareejin doono magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kaas oo maamul loogu sameyn doono gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe, taas oo la mid noqon doona qaabkii loo maray dhismaha maamulka Koonfur Galbeed oo ergooyin la xareeyay ay doorteen madaxweyne Shariif Xasan.
Si kastaba ha ahaatee, wafdi ka socday urur goboleedka IGAD oo dhowr jeer hore gaaray magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa soo jeediyay qorshayaal dhowr ah oo la xiriira shirka dhismaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si looga dheeraado khilaafka labada dhinac.